Egypta: Mivavaka Manohitra An’i Mubarak Ao Anaty Metro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 18:25 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, عربي, 繁體中文, 简体中文, Español, English
(Marihana fa lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Febroary 2008 ity adika eto ity)
Tao anaty metrô i Wahda Masrya raha nandalo toe-javatra tsapany fa mila tantaraina, ka notantarainy izany:
Tao anaty metrô aho raha nisy tovovavy iray mitrotro zaza niditra tao. Nomen'ny vehivavy iray hafa toerana izy mba hipetraka sy haka aina miaraka amin'ilay zaza, saingy niteny ilay vehivavy nanome toerana hoe: “tsy maninona, maty ny zanako noho ireo etona simika rehetra fohany isan'andro”.
Nandòna ny olona rehetra tao anaty metrô izany, ary tany amin'ilay vehivavy nanan-janaka nisy fivontosana teo amin'ny atidoha ny fanontaniana. Latsaky ny enin-taona eo ilay ankizy ary mararin'ny aretina simika izay mila fanomezan-drà, saingy tsy mety mahita ny kitapon-drà ilaina ny reniny satria tsy dia misy mpanana ny karazan-dràn'ny zanany lahy.
Fotoana fohy taty aoriana, nanoro-hevitra azy ny olona mba handeha any amin'ny hopitaly 57357 , saingy namaly izy fa efa nanao izay azony natao mba hamonjena ny ain-janany.. na izany aza, sarotra ny mahita kitapon-drà ho an-janany, izay singa tena ilaina amin'ny aretiny. Mitentina 85 livra ny kitapon-drà, kanefa tsy manana volabe tahaka izany izy. Tampoka teo, nivavaka mafy manohitra an'i Mubarak, ny vadiny sy ny zanany, Gamal sy Alaa, ary koa ireo zanany ny vehivavy iray hafa tao anatin'ny metrô. Avy eo, nanatevin-daharana azy ireo ny vehivavy hafa rehetra, ary nivadika hetsika manohitra ny filoha, ireo zanany lahy sy ny namany izay nanimba an'i Ejypta sy nampisy fahantrana sy aretina mamono ny rehetra- ny tanora sy ny antitra tao anaty metrô.
Ny Hopitaly  57357, dia hopitalim-panjakana mpanao asa soa natsangana ho fitsaboana ny ankizy mararin'ny fivontosana na homamiadana. Ary ny antony niantsoana azy hoe 57357, dia satria izany no kaonty banky nosokafana saika tao amin'ny ankamaroan'ny banky Ejipsiana rehetra mba handraisana ny famatsiam-bola avy amin'ny olona ho fanohizana ny fanorenana ny tetikasa.